MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa yotanga misangano mangwana munzvimbo dzakasiyana siyana panguva iyo VaChamisa vari kukurudzirawo vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva mana kutanga neMuvhuro.
Mumwe mutyairi wendege kuAir Force of Zimbabwe anotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya musikana waaidana naye gore rapera.
Vagari vemuBulawayo vopesana panyaya yekuti guta iri rimboiswa here kana kuti kwete mumaoko ekomisheni yehurumende zvichitevera makakatanwa ari kuitika mukanzuru yeguta iri pamwe nekupomerwa huori kuri kuitwa makanzura eguta reBulawayo.
Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute pamwe neNational Democratic Institute, ayo akaongorora sarudzo gore rapera, anoti kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nezvimhingamupinyi munyaya yekuvandudza zvinhu zvakawanda, nyika ichine mukana mukuru wekugadzirisa zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzichatevera dzisati dzaitwa.
Chikwata cheZimbabwe Netball team chinotambirwa zvine mutsindo zvichitevera kutamba kwachakaita kumakwikwi enhabvu yevanhukadzi pasi rose kuLiverpool kuBritain
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa nyaya yehuori huri kuitika munyika pamwe nematanho anofanirwa kutorwa kuitira kuti huori uhu hupere zvachose munyika.